China Rack System ifektri abakhiqizi | Zhenyuan
Isakhiwo segridi yensimbi yisakhiwo sendawo esakhiwa ngamalungu egridi amaningana axhunywe ngamabhola wamabhola ngendlela ethile yegridi. I-China yaqala ukwethula ubuchwepheshe begridi yensimbi yensimbi nemikhiqizo evela phesheya ngo-1978, enezinzuzo zesikhala esikhulu sangaphakathi, isisindo esincane, ukusebenza okuhle kokuzamazama komhlaba
Isakhiwo segridi yensimbi isakhiwo sendawo esakhiwe ngokuxhuma amalungu egridi amaningi ngamalunga ayindilinga ngokuya ngefomu elithile legridi. I-China yaqala ukungenisa ubuchwepheshe besakhiwo segridi yensimbi nemikhiqizo evela phesheya ngo-1978. Isakhiwo segridi yensimbi sinezinzuzo zesikhala esikhulu sangaphakathi, isisindo esincane, ukusebenza okuhle kokuzamazama komhlaba nokuphepha okuphezulu.
Isakhiwo segridi luhlobo lwesakhiwo sohlelo lwendawo, futhi amalungu acindezelekile axhunywe ngamalunga ngokuya ngemithetho ethile. Amalunga ngokuvamile aklanywa njengeamalunga axhumene, amalungu akhonjelwe ikakhulukazi amandla e-axial, nobukhulu bamalungu ahlukanayo buncane. Lawa malungu ahlangana esikhaleni ayasekelwa ngamanye, ngokuhlanganiswa ngokuhlanganisa amalungu acindezelekile ne-uhlelo olusekelayo, ngakho-ke izinto ezisetshenzisiwe ziyonga. Ngenxa yenhlanganisela yesakhiwo ejwayelekile, inani elikhulu lamalungu nama-node anokuma nobukhulu obufanayo, okulungele ukukhiqizwa kwefektri nokufakwa kwesayithi.
Izakhiwo zegridi ngokuvamile zi-oda eliphezulu ngokwezibalo izakhiwo ezingapheli, engamelana nomthwalo ogxilile, umthwalo onamandla kanye nomthwalo we-asymmetric kahle futhi usebenze kahle ngokuzamazama komhlaba. Isakhiwo segridi singazivumelanisa nezidingo zezakhiwo zomphakathi nezitshalo ezinezikhala ezahlukahlukene nezimo ezahlukahlukene zokusekela, kanye nezindiza zokwakha ezihlukile kanye nenhlanganisela yazo. NgoMeyi 1981, iChina yamemezela ukuthiImithethonqubo yokwakhiwa nokwakhiwa kwezakhiwo zegridi (JGJ7-80). NgoSepthemba 1991, iChina yayibukeza futhi yamemezelaImithethonqubo yokwakhiwa nokwakhiwa kwezakhiwo zegridi (JGJ7-91). NgoJulayi 2010, iChina yamemezela umthethoImithethonqubo Yezobuchwepheshe Yezinhlaka Zesikhala (JGJ7-2010) ngokuhlanganisa izinhlinzeko ezifanele zezakhiwo zegridi, amagobolondo abhalwe kabusha kanye nezakhiwo zomshini wepayipi le-stereo. Ngaphezu kwalokho, kwe-ibhola eliboshiwe amalunga nokufakwa kwawo kwesakhiwo segridi, iChina isimemezele ngokukhethekile I-Bolted Spherical Node yesakhiwo seGridi Yesikhala (JG / T10-2009) kanye Nemandla Amakhulu Amabhawodi Wezinhlaka Zezakhiwo Zegridi Yomkhathi (GB / T16939-2016), Kwamalunga ashiselwe ayindilinga ezakhiwo zegridi nezinsiza zawo, iChina isimemezele I-Welded Hollow Spherical Node of Space Grid Structures (JG / T11-2009). Ezinye izifundazwe zize zakhipha nezilinganiso zasendaweni zokukhiqiza ngokuhlanganyela, njengezinga lendawo lesifundazwe saseJiangsuUkucaciswa Kwezobuchwepheshe Kwamakhanda Esigaxa Esihlanganisiwe Sokuhlangana Kwensimbi Yensimbi Yensimbi (Igobolondo) (DB32 / 952-2006). Lawa mazinga ahlobene ayisifinyezo sezimpumelelo zamanje zobunjiniyela bohlaka lwesakhiwo kanye nocwaningo lwesayensi ezweni lethu, futhi kukhuthaza ngokuqinile ukuthuthukiswa kohlaka lwegridi ezweni lethu
Le nkampani ine-25,000m2 wegridi, umbhobho wepayipi, ama-workshops wokukhiqiza okushisayo nokubanda okubandayo. Le nkampani inezintambo ezintathu zokukhiqiza igridi. Ulayini omkhulu wokukhiqiza wegridi usebenza kakhulu ngegridi yebhola le-bolt, igridi yebhola eshiselwe, i-pipe truss namanye amabhizinisi, ukubona umugqa ophelele womhlangano kusuka ekuvalweni kwe-plasma, ukuhlangana, ukushisela, ukuqhuma kwesibhamu, ukudweba okuzenzakalelayo, ukomiswa kwegesi yemvelo, ukupakisha nokulayisha. Inganikeza amakhasimende ngesevisi eyodwa.
Ubuchwepheshe besakhiwo nemikhiqizo: Ngomkhuba wesikhathi eside, njengefomu lesakhiwo esivuthiwe, isakhiwo segridi yensimbi sisetshenziswe kabanzi ezindaweni ezahlukahlukene zokwakha zomphakathi ezifana nezitshalo ezinkulu zezimboni, izindawo zokugcina izimpahla, izindlu ezinkulu zamalahle, izindlu zeziteshi, izinxanxathela zezitolo , amahholo okubukisa, izindawo zokuvivinya umzimba, izikhungo zokubukisa kanye nesiteshi sesitimela esinejubane elikhulu.
Ingxenye yesibonisi semishini yenkampani
Izinsiza kusebenza 1
Izinsiza kusebenza 2
Izinsiza kusebenza 3
Isingeniso secala lomkhiqizo wenkampani
Le phrojekthi itholakala eZhejiang, eChina
Indawo Yokugcina Amaminerali
Le phrojekthi itholakala eShaanxi, eChina
Le phrojekthi itholakala eShanxi, eChina
Indawo yokudlela yemvelo
Le phrojekthi itholakala eGuangzhou, eChina
Langaphambilini Ukukhiqizwa kwenkampani nokwakhiwa kwesakhiwo
Olandelayo: Ingxenye Yokukhiqiza Indawo Yemboni
Modular Ipayipi Rack Design
Ipayipi Rack Design Ku-Staad Pro
I-Steel Pipe Rack Design
Isakhiwo sePipe Rack Design